अन्तर्वार्ता – Page 65 – Etajakhabar
ताजा खबर :- नेपालमा प्रत्यक बर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवा रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशिरहेका छन । खाडी देश नै अधिकांश युवाहरुको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। खाडीको चर्को गर्मी र कडा परिश्रम हुने किसिमको काममा नेपाली युवाहरु आफ्नो श्रम र सीप खर्चिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा उदयपुर कटारी स्थाई घर भएका केदार पोखरेल भने सम्पूर्ण नेपालीहरुको लागि उदाहरणीय पात्र बनेका छन। पोखरेल आफ्नो मिहेनतबाट इमान्दारीपुर्व...
दुवै खुट्टा चल्लदैनन,तर मज्जाले चलाउछन स्कुटर-कस्को मन नछोला यो भिडियोले
दुवै खुट्टा चल्लदैनन,तर मज्जाले चलाउछन स्कुटर-कस्को मन नछोला यो भिडियोले हेर्नुहोस भिडियो
यस्तो रह्यो ‘रुद्रप्रिया’को प्रिमियर शो,रेखा शिल्पा एकै ठाउँमा ( फोटो / भिडियो सहित )
काठमाडौँ । कात्तिक २ गरे रिलिज डेट तोकीएको फिल्म ‘रुद्रप्रिया’को प्रिमिएर शो सम्पन्न भएको छ । रेखा थापा र आर्यन सिग्देल स्टारर फिल्मको काठमाडौँको कुमारी हलमा शो सम्पन्न भएको हो । शोमा फिल्म युनिट र पत्रकारको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा रेखाका पूर्व श्रीमान छबीराज ओझा, उनकी प्रेमिका शिल्पा पोखरेल, बारीष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य,किरण केसी, पूजा शर्मा, निता ढुंगाना, रिमा विश्वकर्मा ...
दिपकले गरे दिपालाई प्रश्न ! जिन्दगीभर बिहे नगरि दिपकलाई साथ दिन्छु भन्नु हुन्छ रे के हो कुरो ? (भिडियो सहित)
ताजा खबर काठमाडौँ : सर्बाधिक चर्चामा रहेका जोडी दिपक राज गिरि र दिपा श्री निरौलाले एक अन्तर्वार्तामा एकले अर्कालाई आफै प्रश्न गर्दै आफ्नो भित्रि कुरा अनि आफ्नो पोल आफै खोलेका छन l दिपक- दीपाको बहु प्रतिक्षित चलचित्र छक्का पन्जा २ आज बाट देश भरको सिनेमा भवनमा चलिरहदा यता दिपक-दिपा के भन्दैछन त ? आज सम्म कुनैपनि पत्रकारले खोल्न नसकेको एक आर्काको रमाइलो कुराकानी तथा पोल दिपक-दीपाले आफैले खोलेका ह...
छक्का पन्जा २ को बम्पर ओपनिङ् : दर्शकको प्रसंशा पाएपछि रोकिएन प्रियंका र दिपाको आँखामा आँशु
ताजा खबर काठमाडौँ : बिजया दशमीको सप्तमीको दिन पारेर देश भर प्रदर्शनमा आएको सर्बाधिक चर्चा तथा बहु प्रतिक्षित चलचित्र छक्का पन्जा २ को ओपनिङ बम्पर भएको छ । मुलुक भरको सम्पूर्ण सिनेमा घरहरु हाउस फुल भएका छन भने अग्रिम बुकीङमा समेत सम्पूर्ण टिकेट सोल्ड आउट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । जब चलचित्र छक्का पन्जा २ को ओपनिङनै बम्पर भए पछि यस चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारहरु खुसि नहुने कुरानै भ...
नेपाल आइडलको टोली फर्कियो भव्य स्वागत
८ असोज २०७४,काठमान्डौ । 'नेपाल आइडल' ग्राण्ड फिनाले सम्पन्न गर्दै आइडल टिम कतारबाट नेपाल फर्किएको छ । टिमको एयरपोर्टमा भव्य स्वागत गरिएको थियो । फिनालेमा आइडलका उत्कृष्ट १२ प्रतिश्पर्धी सहित नेपालका वारीष्ठ कलाकार,संगितकर्मी तथा लाखौं दर्शकको अपार साथ थियो । टेलिभिजन लाइभमा आएको ठिला सुस्ती र दर्शकको आक्रोशका बारेमा नेपाल आइडलकी होस्ट रिमा विश्वकर्माले अफुलाई पनि दु:ख लागेको र त्यो हाम्रो नभइ प्...
२ बडीगार्ड सहित देखिय नायक प्रदिप खड्का प्रेसमिटमा साथमा २ नायिका
पछील्लो समयमा निकै नै चर्चा कमाएका नायक प्रदीप खड्का अब चलचित्र “लीली बिली” मा देखा पर्दै छन । त्यस्तै चलचित्रमा नायक अनुप बिक्रम शाहीकाे मुख्य भुमिका रहने बताइएकाे छ । उक्त चलचित्रमा नेपाल आईडलका प्रतिस्प्रधी मेनुका पौडेल र सुरज थापाको स्वर सुन्न पाइने छ । मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेल गर्दै चलचित्रको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । ‘लिलिबिली’लाई निर्देशक मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने छन् । काफ...
एकअर्कामा पोल खोल्दै ए मेरो हजुर २ का कलाकारहरु ( भिडियो )
हिन्दी चलचित्रलाई समेत बिस्थापित गर्दै चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ ले गज्जबको माहोल सिर्जाना गरेको छ। यती बेला देश नै ‘ए मेरो हजुर २’ मय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन। नेपाली सिने जगतमा अहोरात्र खटी रहेकी नायीका झरना थापाको डेब्यु निर्देशन रहेका ले पनि यो चलचित्र बहु प्रतीक्षित थियो । यसै चलचित्र बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेका नायक सलीन मान बनियाले पछील्लो समयका चल्तीका नायक हरु लाई मात खु...
पल शाह र आचल शर्माको मुख्य अभिनय रहेको चलचित्र “जोनी जेन्टलम्यान” यतिबेला प्रोमोसनमा ब्यस्त छ। चलचित्र योर स्टाईल पिक्चर्स र ए.जि इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो। चलचित्रमा पल र आचलका अलावा बिकास जोशी, जैन कुवर, सन्तोष सिलवाल गिरी लगायत को अभिनय रहेको छ। महेश दवाडीको कथा रहेको चलचित्र लाई नितिन चन्द ले निर्देशन गरेका हुन। रुपेश थापा र राम शरण उप्रेतीको छायाङ्कन रहेको चलचित्रलाई नबिन...
फिल्म हलमा देखियो यस्तो रुवाबासी
यिनी हुन स्थाइ घर सिन्धुपाल्चोक भई हाल कपन बस्दै आईरहेकी सरिता श्रेष्ठ । उनको वास्तविक नाम सरिता भएपनी उनिलाई सबैले “झरना” भनेर नै चिन्छन रे । चलचित्र “ए मेरो हजुर २” आजबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको छ । सोही क्रममा दर्शकहरुको प्रतिकृया लिन बिहानै गोपीकृष्ण हलमा पुगेकी नायीका तथा निर्देशक झरना थापा लाई के थाहा त्यहा यि अर्की सानी झरना भेटिन्छिन भनेर । आठ बर्षको उमेर देखी नायीका झरना थापाको चलचित्...
पाल्पामा फेला पर्यो अनौठो गुफा, गुफा भित्र छन् मन्दिर, शङ्ख, शिवलिङ्ग
-20698 second ago
-20220 second ago
-19892 second ago
-18824 second ago
-17754 second ago
-17010 second ago
-16367 second ago